တရုတ်ပြည် ခရီးသွား လုပ်ငန်း အားကောင်းစွာဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် Trip.com အုပ်စုသည် ဟောင်ကောင်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ်သည့် ၄.၈၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်ခဲ့သည် - Pandaily
Apr 19, 2021, 16:41ညနေ 2021/04/19 20:01:15 Gloria Li
Nasdaq တှငျ စာရငျးသှငျးထားသညျ့ ကုမ်ပဏီသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျသတ်တပတျက ပေါကျစြေးအရ ဟောငျကောငျတှငျ ရှယျယာ ၂၆၈ ယှမျ (၃၄.၄၉ ဒျေါလာ) ပေါကျစြေးရှိပွီး ငှကွေေးထောကျပံ့မှု ဟောငျကောငျတှငျ ယှမျ ၈၅ သနျး (၁၀.၉ သနျး) ခနျ့ ရှိသညျ။ ယင်းနောက် ဟောင်ကောင်တွင် စတော့အိပ်ချိန်းဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် ရှယ်ယာဈေး ၄.၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ရှယ်ယာတစ်စု လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၂၈၁ (ဟတ်တာ ၃၆.၁၆ ပေါင်) ရှိခဲ့သည်။
“အမေရိကန်နဲ့ ဟောင်ကောင် နှစ်နေရာစလုံးမှာ စာရင်းဝင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စာရင်းဝင်စစ်စစ်တွေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာတည်ရှိမှုနဲ့ အလားအလာကို ပိုမိုထင်ဟပ်စေပါတယ်” ဟု Trip.com အုပ်စု၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဂျိန်းဆန်းမွန်က ရှန်ဟိုင်း ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပသည့် အခမ်းအနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
Trip.com အုပ်စုကလည်း ယခုအစီအစဉ်သည် အသားတင်အမြတ်ငွေရရှိရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနည်းပညာကို ခိုင်မာစေမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်အနေအထားနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ အတွေ့အကြုံများကို စဉ်ဆက်မပြတ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။
Dow Chassion ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ တရုတ်ပွဲစားကုမ္ပဏီ Securities က မေလ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ငါးရက်ကြာ ရုံးပိတ်ရက်များ အတွင်း တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည် သန်း ၂၀၀ နီးပါး လာရောက်လည်ပတ်မည် ဖြစ်ပြီး တရုတ်ခရီးသွားများ အလုပ်အများဆုံး နေ့ဖြစ်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းနေ့သည် တရုတ်ခရီးသွားများ အလုပ်အများဆုံး အချိန်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့.
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးပြည်တွင်းအွန်လိုင်းခရီးသွားအေဂျင်စီဖြစ်သော Travel Agency ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဧပြီ ၁၄ ရက်အထိဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားနေ့ ရုံးပိတ်ရက်များအတွက် လက်မှတ်ကြိုတင်မှာယူမှုပမာဏမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထက် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဟိုတယျဘှတျကငျလုပျသူ ၄၃ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျလာပွီး ခရီးသှားဆှဲဆောငျမှု ၁၁၄ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျလာပွီး ကားငှားဘှတျကငျလုပျသူ ၁၂၆ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျခဲ့ပါတယျ။
တရားဝင် စာရင်းတွေအရ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့က တရုတ်ပြည်တွင်းကို သုံးရက်ကြာ ခရီးသွားတဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည် ၁၀၂ ဒသမ ၉၄.၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ စံချိန်တင်အဆင့်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားဝင်ငွေသည် ၂၇၂ သန်း (၄၂ ဒသမ ၂၇၂ သန်း) အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်လုံး၏ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း ဝင်ငွေရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဝါရှငျတနျနှငျ့ ဘဂေငျြးအကွား တငျးမာမှုမြား ပိုမိုပွငျးထနျလာသညျနှငျ့ အမြှ အမရေိကနျတှငျ စာရငျးသှငျးထားသညျ့ တရုတျကုမ်ပဏီမြားက ဟောငျကောငျတှငျ အလယျတနျးပွရာထူးအထိ ထမျးဆောငျရနျ စီစဉျနပွေီး Trip.com တှငျလညျး ထိုအဆငျ့ထိ ပါဝငျခဲ့သူဖွဈသညျ။ Refinitiv ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ Alibaba ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစလို့ ဒီရေစီးကြောင်းကို စတင်ဖို့ အရွယ်အစား ၁၂၉ သန်းရှိပြီး၊ ဒီနောက်ပိုင်း အာရှရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အချာဖြစ်တဲ့ “Return of Return of Return ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စာရင်းဝင် စုစုပေါင်းဟာ သန်း ၃၆၀ အထိ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပို့.
ပွီးခဲ့တဲ့လက အရငျကလညျး အမရေိကနျစတော့ချအိတျခြိနျးက ခမြှတျခဲ့တဲ့ ဥပဒကေိုလိုကျနာဖို့ ပကျြကှကျတဲ့ နိုငျငံခွားကုမ်ပဏီတှကေို အမရေိကနျစာရငျးစဈက နှငျထုတျမယျလို့ သူတို့က တောငျးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဟောင်ကောင်တွင် ဆင့်ပွားစာရင်းဝင်နေသော တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် အမေရိကန်တွင် စာရင်းဝင်ရန် ကူညီနိုင်သည့်အန္တရာယ်မှ ပြန်လည်စွန့်ကြဲရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက အခြေခံအုတ်မြစ်ချခဲ့ကြသည်။
Topics: မွငျကှငျးTrip.com ရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြရယူပွီး ဟောငျကောငျမှာ လူပျရှားနတေဲ့
Trip.com: အိုလံပဈ တရုတျ နှေ ဦး ပှဲတျော ရခေဲ ပွငျ နှငျ့ ဆီးနှငျး ခရီးသှားလုပျငနျး မွှငျ့တငျ ရနျ
နိုင်ငံတကာ အွန်လိုင်း ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှု ပလက် ဖောင်း Trip.com သည် တရုတ် နှစ်သစ်ကူး ကာလအတွင်း ပြည်တွင်း ခရီးသွားလာ မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာကို တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။